ပြည်သူ့ဘုန်းဘုန်း: April 2008
၂၆.၀၄.၂၀၀၈ ခုနှစ် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့တော်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ န အ ဖ ၏
တစ်ဖက်သတ်ရေးဆွဲထားသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့်ပွဲမှာ
ဦးပဇင်းအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ ဦးပဇင်းတို့နိုင်ငံဟာ တစ်ချိန်ကဆိုရင် မြန်မာလူမျိုးရယ်လို့
ကမ္ဘာအလယ်မှာတင့်တယ်စွာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီး ကိုယ့်အမျိုးကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာကိုထိမ်း
ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၅ နှစ်ကစလို့အခုအချိန်အထိ ဦပဇင်းတို့ရဲ့
ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်၊ ၁၉၆၂-ခုနှစ် ဦးနေ၀င်းရဲ့တစ်ပါတီစနစ်စတင်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကစလို့
မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေတွေဟာ
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးမှာ ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားညီ
အတွက်စတေးခဲခဲ့ကြရပါတယ်၊၁၉၈၈-ခုနှစ်မှာ မ ဆ လ ထက်အဆပေါင်းများစွာဆိုးသွမ်းယုတ်မာတဲ့
န ၀ တ ဆိုတဲ့ စစ်အာဏာရှင်လူတစ်စုဟာ တိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး၊
နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး ပညာရေး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစတဲ့အခြေအနေတွေကို မသိချင်ယောင်ဆောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။
စတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြေလည်စေဖို့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇စက်တင်ဘာမှာသံဃာတော်အရှင်သူ
ပြည့်ဝစေဘို့မေတ္တာပို့လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြုတာကိုမတွေလိုမမြင်လိုတဲ့ န အ ဖ
မိစ္ဆာဒိဌိတွေဟာ ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေကို ရက်ရက်စက်စက်ခြေမှုန်းသုပ်သင်ခဲ့ကြပါတယ်၊
အဲဒီလို ကိုယ့်အမျိုးဘာသာ သာသနာအပေါ်မှာကမ်းကုန်အောင်ရက်စက်တဲ့
န အ ဖ စစ်အုပ်စုကိုကိုကမ္ဘာမှာအဆိုးဝါးဆုံးအကြမ်းတမ်းဆုံးအရက်စက်ဆုံးအဖြစ်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး
ကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်၊ န အ ဖ စစ်အုပ်စုဟာ အဲဒီလိုရက်ရက်စက်
ပစ်သတ်လို့မှအားမရသေးဘဲ သံဃာတော်တွေ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်လျှက်ရှိပါတယ်၊အဲဒီလိုရက်စက်တဲ့ န အ ဖ စစ်အာဏာရှင်လူတစ်စုရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို
ကမ္ဘာမှာမရှိတော့ဘူးလို့ ဦးဇင်းတို့သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌပီနန်ဆရာတော်ကြီးက မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်၊
စစ်အုပ်စုဟာ ၁၉၆၂-ခုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မကြာမီ ၁၉၆၅ခုနှစ်မှစကာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့
သားတော်များဖြစ်ကြသည့်အတိုင်း၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကြက်သီးမွေးညင်းထဖွယ်မျက်ဝါးထင်မြင်
တွေ့သွားခဲ့ကြပါတယ်၊ဒီလိုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှ သံဃာတော်များရဲ့လုပ်ရှားမှုအားလုံး စစ်အာဏာရှင်တို့
ချိတ်ပိတ်ဖျက်သိမ်းကာ ရပ်ကွက် မြို့နယ်လူဦးရေအလိုက်သံဃာအရေအတွက်ကန့်သတ် စာသင်တိုက်များကိုပိတ်ပစ်ပြီး
စေတီပုထိုးနှင့် ကျောင်းကန်များကိုဝင်ထွက်သွားလာမှုအားလုံးကို မှတ်ပုံတင်ပြ
ခွင့်ပြုချက်ကြိုတင်လျှောက်ထားစေပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာကို စစ်ဖိနပ်အောက်သွပ်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။
ယခုအခါ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ပြည်ပသာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာများစွာအောင်မြင်လျှက်ရှိပါတယ်၊
မြန်မာ၊ထိုင်း၊ သီရိလင်္ကာ၊ ကမ္ဗောဒီးယား၊ လော၊ ဘုန်းတော်ကြီးများဟာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်ပွားအောင်
အခုလိုပြည်ပမှာမြတ်နေပေမဲ့ပြည်တွင်း သာသနာမှာ အကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးခံနေရတဲ့အတွက် အရင်ရှုံးနေတယ်လို့
အမှန်တော့ န အ ဖ စစ်အာဏာရှင် လူတစ်စုထင်တိုင်းကြဲလို့ရနေခြင်းဟာ တိုင်းရင်းသားမြန်မာလူမျိုးတွေ
ခေါင်းငုံ့ခံနေကြလို့ပါဘဲ၊အထူးတိုက်တွန်းလိုတာကတော့ မဟုတ်ရင်မခံကြပါနဲ့ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖေါ်
ထုတ်ကြပါ၊ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ့်လူမျိုး၊ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာ မပျောက်ပျက်ရေးအတွက်
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ဦးဇင်းပြောလိုတာကတော့ သုခါသံဃဿ သာမဂ္ဂီ သမဂ္ဂါနံ တပေါသုခေါ၊
သာ၏၊ညီညွတ်တဲ့သူတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကပို၍ချမ်းသာ၏၊ ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို Happy is the harmony
amonagst the sangha or association, Happy is the practice of those in harmony.လို့ခေါ်ပါတယ်၊
ဒါကြောင့်မို့လို့အဖွဲ့အစည်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဟာ ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်။ ညီညွတ်အောင်ကြိုးစားပြီး
န အ ဖ စစ်အာဏာရှင်လူတစ်စု မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပီးသတ်ချုပ်ငြိမ်းသွားသည်အထိ
ဒကာတို့ ကန့်ကွက်မဲကိုရဲရဲပြ စစ်ကျွှန်ဘ၀ ရုန်းထွက်ကြ။
Posted by Ashin dhamma at 7:36 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 7:22 AM0comments
သာသနာ့ကာကွယ်ရေး ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ချူပ် (မလေးရှား)
ကွန် မြူနစ်တရုတ်အစိုးရ ရဲ့ လူသတ်မူ့အားပေးသော ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာ ပေါ်လစီ
အာဖရိကနိုင်ငံတွေ မှာ ဆိုက်ကပ်ခွင့် မရတဲ့ တရုတ်အစိုးရ ရဲ့ ကုန်တင်သင်္ဘောကိုမြင်တွေ့ရစဉ်
အာဖရိကနိုင်ငံတွေ ဟာ စစ်လက်နက်တွေသယ်ဆောင်လာတဲ့ တရုတ်ကုန်တင်သင်္ဘောကို ဆိုက်ကပ် ရပ်နားဖို့ လက်မခံခဲ့ဘူးလို့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးရာ ပြောခွင့် ရှိသူ ဂျန်ယုက အတည်ပြုပြော ကြားသွားခဲ့ ပါတယ်။
ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတခုသာကြည့်ပြီး လူသတ်ဖို့ ဖြစ်အောင် အာဏာရှင်တွေကိုစစ်လက်နက်တွေ
ရောင်းချနေ တဲ့ ကွန်မြူ နစ်တရုတ်အစိုးရ ရဲ့ ကုန်တင်သင်္ဘောကိုအာဖိရိကဆိပ်ကမ်းတွေမှာ ဆိုက်ကပ်ဖို့ အာဖိရိက နိုင်ငံတွေက လက်မခံဘဲ ငြင်း ပယ်ခဲ့ ကြပါတယ်။
ဒီ တရုတ်ကုန်တင်သင်္ဘောဟာ စစ်လက်နက်တွေ တင်ဆောင်လာပြီး လက်ရှိနိုင်ငံရေးတင်းမာမူ့ ဖြစ်ပွားနေပြီး အကြမ်းဖက်မူ့တွေ ဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ ကို ဦးတည်ခုတ်မောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ဇင်ဘာဘွေ မှာနှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်ချူပ်နေတဲ့ အာဏာရှင် ရောဘတ်မူဂါဘီဟာ မကြာခင်က ပြုလုပ်ခဲတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို ထုတ်ပြန်ဖို့ ငြင်းဆန်နေတာကြောင့်၊ နိုင်ငံတကာရဲ့ ပြစ်တင် ဝေဖန်ခြင်း ခံနေရတာပါ။ အာဏာရှင် ရောဘတ်မူဂါဘီဟာ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို မထုတ်ပြန်ဘဲ၊ ပြန်လည်ရေတွက်ဖို့ ပြောနေတာကြောင့် ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံဟာ အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံကြားနိုင်ငံရေးတင်းမာနေပြီး စိုးရိမ်ရတဲ့ အနေ အထားမှာရှိပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေဆိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့် ဇင်ဘာဘွေ နိုင်ငံကို စစ်လက်နက် တွေတင်ပို့တာဟာ မသင့်တော်တဲ့ လုပ်ရပ်တခုလို့ အမေရိကန်အစိုးရ နှင့် နိုင်ငံတကာကဝေဖန်ခဲ့ ပြီး၊ ဆိုက်ကပ်ခွင့်မပေးဖို့ ကိုလည်း အမေရိကန်အစိုးရက အာဖိရိကနိုင်ငံ အားလုံးကိုပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ ဟာ ကုန်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်အိမ်းနီးချင်း အာဖိရိကနိုင်ငံတွေအပေါ် ရေကြောင်းလမ်းကို မှီခိုနေရတာပါ။
တောင်အာဖရိက နှင့် မိုဇန်ဗစ် နိုင်ငံတွေက ဒီ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေတင် ဆောင်လာတဲ့ တရုတ် ကုန်တင်သင်္ဘောကို ဆိုက်ကပ်ခွင့်မပေးဖို့ခဲ့လို့ ၊ အင်ဂိုလာ နိုင်ငံ မှာရှိတဲ့ လ၀မ်းဒါ ဆိပ်ကမ်း ဦးတည်ခုတ်မောင်းနေပါတယ်။ ဆိုက်ကပ်ခွင့်ရမရ ကတော့အခုထိမသိရသေးပါဘူး။ အကောင်းဆုံးကတော့ တရုတ်ပြည်ပြန်မောင်းဖို့ စဉ်းစားနေကြတယ်။ တရုတ်အစိုးရ ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးရာ ပြောခွင့် ရှိသူ ဂျန်ယုကတော့ ဒီလိုဆုံးဖြတ်မူ့ဟာ သင်္ဘောကုမ္ပဏီ ပေါ်မူတည်ပါတယ်လို့ဆိုတယ်။
Posted by Ashin dhamma at 10:16 AM0comments
အော်စကာဆုရ ဇာတ်ကား No Country For Old Men (ရုပ်ရှင်အညွှန်း)
ရုပ်ရှင်ပြသချိန် ပြီးသွား၍ ရုံထဲမှ ပြန်ထွက်လိုက်သည်နှင့် ရင်ထဲတွင် ဘာမှ မကျန်ရစ်ခဲ့သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ ရှိသလို၊ ပဟေဠိပေါင်း များစွာ၊ အတွေးပေါင်း များစွာ၊ မေးခွန်းပေါင်း များစွာဖြင့် နောက်တခါ ပြန်ကြည့်ဖြစ်ချင်အောင် ပရိသတ်ရင်ကို စွဲနစ်စေခဲ့သည့် ဇာတ်ကားပေါင်း များစွာလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ဒါရိုက်တာ စတီဗင်စတီးဘာ(ဂ်) ၏ Schindler’s list ဇာတ်ကားဆိုလျှင် စစ်အစိုးရမှ ရုံတင်ပြသခွင့် မပြုခဲ့သည့်အပြင် ပြင်ပ အခွေအငှားဆိုင်များတွင်လည်း ငှားရမ်းပြသခြင်း မပြုရန် တားမြစ်ခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် VCD/DVD/LD များ ထွန်းကားခြင်း မရှိသေးဘဲ VHS Tape ကာလသာ ရှိသေးသည်။ အခွေ အငှားဆိုင်များကလည်း ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ငှားရမ်း၍ ကြည့်သူများကလည်း ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ကြည့်ရသည့် ကာလဖြစ်သည်။ နာဇီ ဂျာမဏီတို့၏ ဖိနှိပ် ညှဉ်းပန်းမှုများ၊ သနားညှာတာ ကင်းမဲ့ပုံများကို မြန်မာပြည်သူများက ရုပ်ရှင်အဖြစ်သာ မြင်ကြရသော်လည်း ဒါရိုက်တာ၏ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပုံ ပြောင်မြောက်သောကြောင့် ထိုအဖြစ်မှာ မိမိရှေ့ ပြင်ပ၌ပင် လက်တွေ့ကျကျ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရသကဲ့သို့ တောက်’တခေါက်ခေါက်နှင့် အခဲမကျေ ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။
ရုပ်ရှင်အနုပညာ အတတ်ပညာဖြင့် ကျနော်တို့ မမြင်လိုက်၊ မတွေ့လိုက်၊ မကြားလိုက် ရသည်များမှာလည်း ပြန်လည်၍ ကြားရ၊ မြင်ရသည်မှာ အစစ်မဟုတ်သော ကမ္ဘာ (Virtual World) ဆိုပေမယ့် တကယ့်ကမ္ဘာ (Real World) ထက်ပင် ရင်ထဲသို့ ဝင်လာပုံမှာ နက်ရှိုင်းလှပေသည်။ Brave Heart ဇာတ်ကားထဲမှ မြေကြီးတွင် ထိုးစိုက်ရင်း လှုပ်ရမ်းနေသည့် စကော့ဓားရှည်သည် နိုင်ငံတကာမှ တော်လှန်ရေးသမားများ၏ ရင်ဘတ်ကိုပင် လှုပ်ခါနိုင်စွမ်း ရှိခဲ့ပေသည်။ မြန်မာရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများ ရုံပြည့်ရုံလျှံ အားပေးကြသည်မှာ မကြားရတာ ကြာလှသည့် သတင်းတပုဒ် ဖြစ်နေသော်လည်း နိုင်ငံခြား ဇာတ်ကားများ (ဥပမာ - ဂျော်နဒပ်၊ ကီယာနိုက်တလေတို့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည့် Pirates Of Caribbean: At World’s End ဇာတ်ကားဆိုလျှင် နေပြည်တော်နှင့် ရှေ့ဆောင် ရုပ်ရှင်ရုံ နှစ်ရုံစလုံးတွင် ပြိုင်တူပြသခဲ့ရာ ပရိသတ်မှာ တိုးမပေါက် ရှိခဲ့သည်) မှာ ပြသချိန်နီးမှ လာရောက်ကြည့်ရှုလျှင် မှောင်ခိုလက်မှတ်ပင် ရှာမရချေ။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ကာလများတွင် ဘဝသရုပ်ဖော် ဒရမ်မာနှင့် ဖြစ်ရပ်မှန်အခြေခံ ဇာတ်လမ်းများဖြစ်သည့် Titanic, Gladiator, Beautiful Mind စသည့် ဇာတ်ကားများ အော်စကာဆု ရရှိခဲ့သော်လည်း ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် Lord Of The Ring: Return of the King ဇာတ်ကားများကို အော်စကာဆုပေါင်း ၁ဝ ဆု ပေးလိုက်ခြင်းမှ အစပြု၍ သဘာဝလွန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများနှင့် အထူးပြု ဖန်တီးချက်များ ထည့်သွင်း ရိုက်ကူးထားသော ဇာတ်ကားများမှာလည်း အော်စကာဆုများ ရရှိခဲ့ကြသည်။
မျက်မှောက်ဘဝ အမေရိကန် လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုပဋိပက္ခများကို ရိုက်ကူးပြသည့် Babel, Crash စသည့် ဇာတ်ကားများမှာလည်း အော်စကာဆု ရရှိလာသကဲ့သို့ ရာဇဝတ်မှုနောက်ခံ မြေအောက် လူ့အဖွဲ့အစည်း လောကနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အခြေအနေများကို ရိုက်ကူးပြသခဲ့သည့် Crash ဒါရိုက်တာ မာတင်စကော့ဆက်ဇီ ၏ The Departed ယခုနှစ်တွင် No Country For Old Men ဇာတ်ကားမှာ အော်စကာဆု ရရှိခဲ့သည်။ No Country For Old Men ဇာတ်ကားမှာ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု၊ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုနှင့် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ဆု အပါအဝင် ဆုပေါင်း ၄ ဆု ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ ဟောလိဝုဒ် ဇာတ်ကားများ နှစ်သက်သည့် မြန်မာရုပ်ရှင် ဝါသနာအိုးများအတွက် မတ်လက ကျင်းပခဲ့သည့် အကြိမ် ၈ဝ မြောက် အော်စကာဆုပေးပွဲတွင် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆု၊ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု အပါအဝင် ဆု ၄ ဆု ဆွတ်ခူးခဲ့သည့် No Country For Old Men ဇာတ်ကားကို မဇ္ဈိမ အင်တာနက် စာမျက်နှာကနေ ပရိသတ်အတွက် မိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပါသည်။
အမေရိကန်စာရေးဆရာ ကော်မက် မက်ကာသီ၏ အမည်ရှိ နာမည်ကျော်ဝတ္ထုကို Joel & E Than Coen ညီနောင်က တော်မီလီဂျုံး၊ ဂျော(ရှ်) ဘရိုလင်၊ ဂျေဗီယာဘာဒင်တို့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားကြသည်။ လက်မရွံ့ လူသတ်သမား ဘန်တွန်ဂျီဂါအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသည့် မင်းသား ဂျေဗီယာဘာဒင်မှာ စပန်းနစ်(ရှ်) ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပြီး၊ ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်ကတည်းက မင်းသမီး ပယ်မီလု(ပ်) ခရု(ဇ်)နှင့် Jamon အမည်ရှိ ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသည်။ ကိုလံဘီယာ စာရေးဆရာ ဂေဘရီယယ်ဂါဇီယာ မားကွတ်(ဇ်)၏ ဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်လည် ရိုက်ကူးသည့် Before Night Falls အမည်ရှိ ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။
မကြာခဏ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခြင်း ခံထားရသည့် ကျူးဘားကဗျာဆရာ ရီနယ်(လ်)ဒိုအရီနာ၏ ဘဝကို သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ဂျေဗီယာဘာဒင်မှာ ထိုဇာတ်ကားဖြင့် ကိန်း(စ်) ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ထူးချွန်ဆု ရရှိခဲ့သည်။ (ရီနယ်(လ်)ဒို အရီနာမှာ ၁၉၈ဝ ခုနှစ်တွင် ကျူးဘားနိုင်ငံကို စွန့်ခွာခဲ့ပြီး နယူးယောက်တွင် အခြေချနေထိုင်ကာ ၁၉၉ဝ တွင် AIDS ဝေဒနာနှင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။) ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် တော်မီလီဂျုံးက ဒေသခံရဲအရာရှိ တွမ်ဘဲ(လ်)အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
မင်းသား ဂျော့(ရှ်)ဘရိုလင်က သမင်ချိုများကို စုဆောင်း ရောင်းချသူအဖြစ် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်သော ငွေကြေး အရှုပ်တော်ပုံတွင် ပါဝင်လာရသူအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
မက္ကဆီကိုနှင့် နယ်စပ်ချင်း ကပ်လျက်ရှိသော အနောက်ပိုင်း တက္ကဆက် ပြည်နယ်တွင် ၁၉၈ဝ ပြည့်လွန်နှစ်များက မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားသူများနှင့် လက်မရွံ့ လူသတ်သမားများ၊ ငွေကြေးအတွက်ဆိုလျှင် စိတ်အပြောင်းအလဲ မြန်သည့် ရဲအရာရှိများ အကြောင်းကို ခြယ်မှုန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုဇာတ်ကားဖြင့် အော်စကာဆု ရရှိသွားခဲ့သည့် မင်းသား ဂျေဗီးယာ ဘာဒင်မှာ ဇာတ်လမ်းအရ ဗီလိန်ထက်ဆိုးသည့် ရုပ်ရှင်ပြဇာတ်အခေါ် Antagonist ဆိုသည့် ရွံ့ရှာမုန်းတီးဖွယ်ရာ ဇာတ်ရုပ်ကို သရုပ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
လက်မရွံ့ လူသတ်သမားတယောက်၏ အပြုအမူမျိုးနှင့် သရုပ်ဆောင်သွားပုံကြောင့် No Country For Old Men ဇာတ်ကားကို လူကြိုက်များစေခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်ကား၏ အစမှာပင် အန်တွမ်ချီဂါ (ဂျေဗီယာဘာဒင်) မှာ သူ့ကို ဖမ်းဆီးထားသည့် ရဲတယောက်ကို သတ်ဖြတ်ပြီး ရဲကားကို ခိုးယူ ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ အဝေးပြေးလမ်းမတွင် ကားပိုင်ရှင် အဖိုးအိုတယောက်ကို သတ်ပစ်ပြီး ထိုသူ၏ ကားကို ယူကာ ခရီးဆက်ခဲ့သည်။
သမင်ချိုများကို စုဆောင်းရောင်းချသူ လီဝီလင်မော့(စ်) (ဂျော့ရ်ှဘရိုလင်) မှာ တနေ့တွင် သမင်ချိုများ ရရှိဖို့အတွက် အမဲလိုက်ရာမှ ရီယိုဂရန်တီ အရပ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ဂိုဏ်းအချင်းချင်း ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ပွားသောနေရာတွင် သေနတ်ဒဏ်ရာနှင့် အလောင်းများအပြင် ဒေါ်လာနှစ်သန်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို တွေ့ရှိခဲ့ရာမှ သူ၏ ကံကြမ္မာလည်း အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အမဲလိုက်သမားအဖြစ်မှ နေ့ချင်းညချင်း သန်းကြွယ်သူဋ္ဌေး ဖြစ်ခဲ့ရသော်လည်း သူ့လက်ထဲမှ ငွေနှင့် ဘိန်းဖြူများကို ပြန်လည် ရယူရန်အတွက် မူးယစ်မှောင်ခိုဂိုဏ်းမှ လက်မရွံ့ လူသတ်သမား အန်တွန်ချီဂါနှင့် မက္ကဆီကန် လက်မရွံ့ လူသတ်သမားများကို ငှားရမ်းထားပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် ဇနီးဖြစ်သူနှင့်အတူ ရပ်ခြားမြေခြားတွင် ဇာတ်မြှုပ်နေထိုင်ရန် ကြံစည်ခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။ ဒုစရိုက် မှုခင်းများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ဂိုဏ်းများကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းရန် ကြံစည်နေသော အငြိမ်းစားယူတော့မည့် ရဲအရာရှိ တွမ်ဘဲ(လ်)မှာလည်း ဒေါ်လာနှစ်သန်း၊ ဘိန်းထုပ်များကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရာဇဝတ်မှုများနောက် ခြေရာခံလိုက်ရင်း မုဆိုးတလှည့်၊ သားကောင်တလှည့် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
No Country For Old Men ဇာတ်ကားတွင် လောဘရမက်၊ ငွေကြေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် မသမာမှုများကြောင့် မုဆိုးက သားကောင်၊ သားကောင်က မုဆိုး၊ လိုက်သူမှ ပြေးသူ၊ ပြေးသူမှ လိုက်သူအဖြစ် မောဟ ဝင်္ကပါအတွင်း ကျင်လည်ရသည့် လူသားတို့၏ မိုက်တွင်းနက်ပုံများကို ရှုစားရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိအသက်နှင့် ခန္ဓာအတွက် သူတပါးကို စတေးရာမှ “သူ့အသက် သတ်ရင်းတန်းလန်းနှင့် ငါပါ သေသည်” ဆိုသည့် စကားလိုမျိုး ဘဝတွေကို တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်းမှ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို အခြေခံထားသော်လည်း ယခင်နှစ်များတွင် ထိုကဲ့သို့ ဇာတ်ကားများကို အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုအတွက် ရွေးချယ်လေ့ မရှိသော်လည်း ယခုဆိုလျှင် Crime-Drama ဇာတ်ကား အမျိုးအစားဖြစ်သည့် Crash, The Departed နှင့် No Country For Old Men ဇာတ်ကားများကို အကောင်းဆုံး ဆုပေးခဲ့သည်မှာ သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ဒါရိုက်တာ Coen ညီနောင်မှာ ၁၉၈၅ ခုနှစ်က ပွဲဦးထွက်ဇာတ်ကား Blood Simple နှင့် အောင်မြင်မှု ရရှိလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်းမှ မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်များကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် တင်ဆက်ထားသော်လည်း သဘာဝ ရှုခင်းအလှများနှင့် လူတို့၏ စရိုက်သဘောများကြောင့် ဖြစ်ပွားရသည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ သမရိုးကျ ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးတင်ဆက်နည်း ပညာမှ ခွဲထွက်လာသည့် ရိုက်ကူးမှု နည်းပညာများကြောင့်လည်း အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု ရရှိလာခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
Posted by Ashin dhamma at 8:56 AM0comments
နအဖ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Vote Yes စည်းရုံးရေးဆင်း Print
Posted by Ashin dhamma at 8:48 AM0comments
အရင် ဒိုင်, အခု ထိုးသား(၀င်းပေါ်မောင်)
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များကိုကြည့်လျှင် စစ်တပ်မှ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်လုပ်ဆောင်သည့် ကိစ္စရပ်တိုင်း၌ ပြင်ပအသွင်သဏ္ဌာန်နှင့် အတွင်းအနှစ်သာရတို့ အမြဲတစေ ကွဲပြားနေလေ့ ရှိသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ အရေးပါသည့် ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်သည့် ၁၉၅၈, ၁၉၆၂, ၁၉၈၈ ခုနှစ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုများ၊ ၁၉၆၀, ၁၉၉၀ ပါတီစုံ ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် ၁၉၇၃ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲတို့တွင် အသွင် နှင့် အနှစ် ကွဲပြားနေသည်ကို အထင်အရှား တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ဆန္ဒခံယူပွဲကို လူထု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပုံက “ဒါ သူတို့ ဆင်းမပေးဖို့ လုပ်တာ” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၉၀ တွင် ဗိုလ်စောမောင် ဦးဆောင်သည့် န၀တ စစ်အစိုးရက ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပေးခဲ့သည်။ ထိုရွေးကောက်ပွဲမှာ အခြေခံဥပဒေ တခုမျှ မရှိသည့် အခြေအနေတွင် ကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုရွေးကောက်ပွဲကို ၁၉၄၇ ကကဲ့သို့ `တိုင်းပြည်ပြုလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ´ ဟုလည်း အတိအလင်း မဆိုထား။ အာဏာလွှဲပြောင်းရေးကိုလည်း တိတိကျကျ မပြဋ္ဌာန်းထား။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွင် “လွှတ်တော်ကို မဲဆန္ဒနယ်များမှ ဤဥပဒေနှင့်အညီ ရွေးကောက်တင်မြောက်လိုက်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။” ဟူ၍ ပြဋ္ဌာန်းထားသော်လည်း လွှတ်တော် ခေါ်ယူရေးအတွက် အချိန်ကာလ တိတိကျကျ မသတ်မှတ်ထား။
ထိုသို့ ပျော့ကွက်များ ရှိနေသော်ငြား န၀တ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်က “ပါတီစုံ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ … အခြေခံ ဥပဒေကို အရွေးခံရတဲ့ ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ကြရမယ့် ကိစ္စ” ဟူ၍ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီကရော ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးတွင်ပါ ကမ္ဘာသိ ပြောဆိုခဲ့သည်။
“နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင် တပ်မတော်က ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေး” ဆိုသည့်အချက်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း တောင်းဆိုလာသည်။ ဤအချက်ကို တောင်းဆိုနိုင်ရေးအတွက် `အမျိုးသားညီလာခံ´ကို ဇွတ်တရွတ် ဖန်တီးခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် တောင်းဆိုချက်ကို ထောက်ခံပေးမည့် `ကြံ့ဖွံ့´ကို စစ်တပ်ပိုင်အဖွဲ့အစည်း အဖြစ် မဟားဒရား တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ယခု အဆိုပါတောင်းဆိုချက်ကို လူထုဆန္ဒခံယူခြင်းသည် စစ်အစိုးရကိုယ်တိုင် `ထိုးသား´ ဖြစ်လာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရ ဒိုင်ကိုင်စဉ်က ပါတီများကို လွှတ်တော်သက်တမ်း `တကြိမ်စာ´ အတွက် ယှဉ်ပြိုင်ခိုင်းခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရကိုယ်တိုင် ထိုးသားဝင်လုပ်သည့် ယခုအခါတွင် လွှတ်တော်သက်တမ်း `တသက်စာ´ အတွက် ယှဉ်ပြိုင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်နေသည့် ဆန္ဒခံယူပွဲသည် ပြင်ပအသွင်သဏ္ဌာန်အားဖြင့် “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုရေး” ဖြစ်ပြီး၊ အတွင်းအနှစ်သာရအားဖြင့် “စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ အတည်ပြုရေး” ဖြစ်နေပါသည်။
သို့သော် ပြောနိုင်တာတခုတော့ အသေအချာ ရှိပါသည်။ ယင်းမှာ “မြန်မာပြည်သူလူထုက စစ်အစိုးရတောင်းဆိုချက်ကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်ချလိုက်သည်” ဟု ကမ္ဗည်း မော်ကွန်း စိုက်ထူနိုင်မည်။ လက်နက်ကိုင် စစ်အစိုးရကို လက်နက်မဲ့ ပြည်သူများက နှလုံးရည်ဖြင့် အောင်နိုင်မည်။ နအဖသည် လူထုမလိုလား လက်မခံသော တရားမ၀င် အစိုးရဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယအကြိမ် ကြေညာနိုင်မည်။
လူထု ထည့်မည့် ကန့်ကွက်မဲသည် `အခြေခံဥပဒေကို ကန့်ကွက်ခြင်း´ ဆိုသည်ထက် ပိုလွန်စွာ “စစ်အစိုးရ ဖြုတ်ချရေး ဆန္ဒမဲ” အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူထုကန့်ကွက်မဲ အများစုရခဲ့လျှင် နအဖ၏ ဖ၀ါးခုနစ်လှမ်း နိုင်ငံရေး အစီအစဉ်ကြီးသည် တုံ့ခနဲ ရပ်တန့်သွားမည် ဖြစ်သည်။ လူထုက `ရပ်´ ဟု တားမြစ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် စစ်အစိုးရ တောင်းဆိုထားသည့် “နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင် တပ်မတော်က ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေး” ကို မြန်မာလူထုက `ခွင့်မပြု´ ဟု အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါသည်။
ထိုအချက်က ဆန္ဒခံယူပွဲသည် ဥပဒေကိစ္စမျှသာ မဟုတ်၊ စစ်အစိုးရ ဆက်လက် တည်ရှိရေး မရှိရေးနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်ဟု ဖော်ပြနေပါသည်။ ဥပဒေထဲတွင်ပါသည့် အနာဂတ်၌ စစ်တပ် ဦးဆောင်မှုကို လူထုက မထောက်ခံဘူး ဆိုသည်မှာ၊ ယခု အုပ်ချုပ်နေသည်ကိုလည်း လက်မခံဟု ဆိုလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူထုအနေဖြင့် ဥပဒေကို ကန့်ကွက်မဲ ပေးခြင်းသည် `နအဖ အလိုမရှိ´ဟု ကြွေးကြော်လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ မဲစာရွက်များဖြင့် ဖော်ပြလိုက်သော ကြွေးကြော်သံက စစ်အစိုးရ ဆက်လက်တည်မြဲမှုကို အကြီးအကျယ် ကိုင်လှုပ်နိုင်မည်ဟု အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။
Posted by Ashin dhamma at 9:02 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 6:36 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 5:30 AM0comments
သင်္ကြန်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ “ သင်္ကန္တ” ဆိုတဲ့ ပါဠိစကားမှ ဆင်းသက်လာတာ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အကူးအပြောင်းပေါ့။ နှစ်တစ်နှစ်က နောက်ထပ်နှစ်တစ်နှစ်ကို ကူးပြောင်းသွားမည့်အချိန်ကာလမှာ နှစ်ဟောင်းက ဆိုးမွေတွေကို ဆေးကြောပြီး နှစ်သစ်ကို ကျက်သရေရှိရှိ မင်္ဂလာရှိရှိ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ဆက်လက်ခရီးနှင်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။
ယခုဧပြီလ (၁၃)ရက်နေ့ဆိုလျှင် သင်္ကြန်အကျနေ့ရောက်တော့မယ်။ ကျနော်တို့ ဒီနှစ်(၂၀၀၈) သင်္ကြန်ကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ဆင်နွှဲကြမလဲ၊ ဘယ်လိုဆိုးမွေတွေကို ဆေးကြောကြမလဲ။ ဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ဘယ်လိုမင်္ဂလာတွေကို လက်ခံကြမလဲဆိုတာ အရေးကြီးသည်။
ကျနော်တို့မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲတွေကို ဆင်နွှဲတဲ့နေရာမှာ “ ရေသဘင်ပွဲ” တစ်ခုတည်းဆင်နွှဲကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုပြီး နှစ်သစ်ကိုကူးပြောင်းကြတာပါ။ ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် “ဇီဝိတဒါန” လို့ပြောတဲ့ “ငါးလွှတ်ပွဲ” ဘေးမဲ့လွှတ်ပွဲတွေ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲတွေ၊ စတုဒီသာ အလှူတွေ စတဲ့ ကုသိုလ်ပွဲတွေဆင်နွှဲပြီး နှစ်သစ်ကို မင်္ဂလာရှိရှိကြိုကြပါတယ်။
ဘုရားသွားကျောင်းတက်၊ ဥပုဒ်ရက်ရှည်သီလစောင့်ပြီး မိမိရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကိုတည်ဆောက် ၊နောင်အပြစ်မပြုဖြစ်အောင် အဓိဌာန်ချမှတ်ကျင့်ကြံကြတဲ့ သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီလိုကောင်းမှုတွေစိုက်ပျိုးရုံတင်မက၊ မကောင်းမှုတွေကိုပေါင်းသင်တဲ့ ပွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ရပ်ကွက်ကျေးရွာတွေရဲ့ လမ်းတွေတိုင်းမှာ နောက်ထပ်မကောင်းဆိုးဝါးတွေမနှောင့်ယှက်နိုင်အောင် သံဃာတွေပင့်ပြီး ပရိတ်တရားနာကြ၊ ပရိတ်ရေ၊ ဆီမန်း၊ ရေမန်း စတဲ့ပရိတ်အာနိသင်သက်ရောက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကိုယ့်ခြံ၊ ကိုယ့်ဝိုင်းလေးမှာကြဲဖြန့်ပက်ဖျန်းပြီးမကောင်းဆိုးဝါး မိစ္ဆာတွေကို တောခြောက် ထုတ်ကြတယ်။
“တောခြောက်တယ်” ဆိုတာကတော့ သံပုံးတို့၊ သံတိုင်ကီတို့ကို ဆူညံအောင်တီးခတ်ခြောက်လှန့်တာပါ။ အဲဒီလိုခြောက်လှန့်ထုတ်လိုက်လျင် မိစ္ဆာတွေရွာက ထွက်ပြေးရတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ သင်္ကြန်မှာပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ မြန်မာမှုဓလေ့ ထုံးတမ်းတွေပါ။
ဒီနှစ်မဟာသင်္ကြန်မှာကော ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေအရ ကျုပ်တို့ဆင်နွှဲရမှာပဲ။ အရေးကြီးတာက နှစ်သစ်ကိုဘယ်လိုယုံကြည်မှုတွေ ဘယ်လိုခံစားချက်တွေ ဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ကူးပြောင်းကြမလဲ။ သံဃာထု လူထုရဲ့သွေးနံ့တွေ၊ မိစ္ဆာတွေရဲ့ ယမ်းနံ့တွေဟာ ခုထိလမ်းမတွေပေါ်မှာ လတ်ဆတ်နေတုန်းပဲ၊ ကျုပ်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဒါဏ်ရာတွေက နာကျင်နေဆဲပဲ။ ကျောင်းတိုက်တွေမှာ စစ်ဖိနပ်ခြေရာတွေ ကျန်နေဆဲပဲ။ ဘုရားတန်းစောင်းတွေမှာ မိစ္ဆာတွေ စီးနင်းသိမ်းပိုက်ပြီး မဖွယ်မရာပြုမှုတွေရဲ့ အရိပ်တွေဟာ ကျန်နေဆဲပဲ။
အဲဒီအနာတရတွေကို ကျုပ်တို့က ဘယ်လိုမေ့ပစ်နိုင်ပါ့မလဲ။ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ…။ ဒါဆို ကျုပ်တို့မြန်မာတွေရဲ့ မဟာသင်္ကြန်ဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ကို ခြောက်ခြောက်ကပ်ကပ်နဲ့ပြီးစေလိုက်ရတော့မှာလား။ ဒါဟာလည်း မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါဘဲ။
ဒီတော့ … ကျုပ်တို့်ရင်ထဲမှာ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ ခံယူချက်၊ ယုံကြည်ချက်တွေကို ဖြည့်သိပ်ပြီး မြန်မာတို့ရဲ့မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ရိုးရာဓလေ့မပျက် ဆက်လက်ကျင်းပဆင်နွှဲကြရမှာဘဲ။ ကျုပ်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ပုံသဏ္ဍာန်တစ်မျိုးနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးဖော်ထုတ်ကြမယ်။ ဒါဟာလူထုရဲ့ ကံဆောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။
အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိစေဖို့အတွက် ညစ်ပေဆိုးယုတ်လှတဲ့ မင်းဆိုးမိစ္ဆာတွေ သူတို့ရဲ့နောက်လိုက် အမင်္ဂလံ၊ လူ့ဗာလနံတွေ မြန်မာ့မြေပေါ်က ပပြောက်ရေးဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ “အတာရေဆေးပွဲ” ကိုဆင်နွှဲကြပါစို့။
မိမိတို့ကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ၊ သံဃာတော်တွေ မရှိသလောက်ဖြစ်နေပေမယ့် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို ရောက်အောင်သွားပြီး တိမ်းရှောင်နေရတဲ့၊ အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ သံဃာတော်တွေ၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ အန္တရာယ်အပေါင်းမှ လွတ်မြောက်စွမ်းဆောင်နိုင်စေဖို့ အဓိဌာန်ပြု ဥပုဒ်သီတင်းဆောက်တည်၍ ဆုတောင်းပေးကြပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွတ်မြောက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဘေးမဲ့လွှတ်ခြင်း၊ ဇီဝိတဒါန ငါးလွှတ်ခြင်းများကိုပြုကြပါ။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဘေးမှ ကင်းလွတ်စေရေးအတွက် အဓိကပဓါနဖြစ်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်ထွန်းရေးကို ရည်ရွယ်၍ စတုဒီသာ အလှူပွဲများကို ကျင်းပကြပါ။
နှစ်သစ်ကိုမင်္ဂလာရှိစေဖို့၊ မညစ်နွမ်းစေဖို့အတွက် ကျက်သရေယုတ်လှသော သန်းရွှေ၊ မောင်အေး စတဲ့ နအဖမိစ္ဆာထိပ်သီးများနဲ့ မိစ္ဆာမြီးဆွဲ ငနဲကြီး ငနဲငယ်တွေ ကျဆုံးရေးကို ရည်ရွယ်ပြီး ပရိတ်တရားတော်နာ၊ တက်တက်ကြွကြွ သံပုံးတီးပြီး တောခြောက်ထုတ်ကြပါ။
ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့စေတနာတွေဟာ အသေအချာကို မိစ္ဆာတွေကြမ္မာကိုငင်စေပါလိမ့်မယ်။ တပြည်လုံးရဲ့ဆန္ဒတွေ မဟာသင်္ကြန်အခါသမယမှာ အတူတကွ ဆုံလိုက်ကြရင် ဒင်းတို့ဘာခံနိုင်လိမ့်မလဲ။
ယုံကြည်မှုစေတနာ ထက်ထက်သန်သန်နဲ့ ညီညီညွှတ်ညွတ် လုပ်ဆောင်ကြပါ။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အဟောတောင်ရှိပါသေးတယ်….။
“ စေတနာ၊ ကမ္မံ၊ ဘိက္ခဝေ၊ အဟံဝဒါမိ” တဲ့ ….. ။
အဓိပ္ပါယ်က “ (ဘိက္ခဝေ) ရဟန်းတို့ စေတနာသည် (ကမ္မံ) ကံကိုဖြစ်စေသည်ဟု (အဟံ) ငါသည် (၀ဒါမိ) မှတ်ယူပါ၏။ ”
ကဲ… မြန်မာပြည်သားပြည်သူအပေါင်းတို့ ကျုပ်တို့ရဲ့ စေတနာတွေနဲ့ ဒင်းတို့ကို ကံပြုကြပါကုန်စို့။
Posted by Ashin dhamma at 12:02 AM0comments
ပြည်သူတွေကတော့ နိုး ပါတဲ့ဗျာ၊ ကဲ ဘယ်နှယ့်ရှိစ နအဖ ရေ။
ဧပြီ ရရက် ၂၀၀၈ က generation wave က နိုင်ငံတ၀ှမ်းမှာ Vote No ကင်ပိန်း စဖို့ လှုံဆော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ yangon က bus ပေါ်မှာပါ။
အခု နေရာအနှံမှာ ပြည်သူတွေ နိူးနိူးကြားကြား နိူးနေကြပါပြီ ခင်ဗျာ။ နိူး နိူး နိူး ပါ။။
ကျားနဲ့ဆင် လယ်ပြင်မှာ.တွေ့ ကြပြီ။
သည်းခံခြင်းဆိုတာ အတိုင်းအတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ လူ့ သမိုင်းတလျှောက် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှ အားလုံးသော တော် လှန်ရေးတွေ ဟာလည်း သည်းခံခြင်း အတိုင်းအတာရဲ့ တဖက်စွန်း ရောက်သွားတာမို့တော်လှန်ခဲ့ ကြတာပါ။
ယနေ့ ခေတ်ဗမာပြည်မှာ တရားစီရင်ရေးဥပဒေမဲ့ ။ မတရား လက်နက်ပြ အာဏာသိမ်းထားတဲ့ စစ်အာဏာ ရှင်က သူ့ အာဏာစည်းစိမ် တည်မြဲမှု တစ်ခုထဲအတွက် လာဘ်စားဖောက်ပြန်။ ကိုယ့်လူမျိုး အချင်းချင်း ညှင်း ပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ရုံမက ခိုးဆိုး လုယက်မိုက်မဲတဲ့ ရာဇ၀တ်သားတွေကို နေရာပေး လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ ပေးလာ တဲ့အခါ။ မိမိ သမာအာဇီဝနဲ့ တပင်တပန်း ကြိုးကုပ် ရှာထားခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အ သက်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာ လုံခြုံ မှုမရှိ။ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာသည် အချိုးနှိမ်ခံ နောင်ရေးအနာဂတ် မတိ ကျတဲ့အထိ ဖြစ်လာနေခြင်း စသည်ဖြင့် အားလုံးခြုံကြည့်တဲ့အခါ တိုင်းပြည်ပျက်လာနိူင်တဲ့အထိ ပြည်တွင်းစစ်မီး ဖြစ်လာနိူ်င်တဲ့ အထိ ဆိုးရွားလာစေမဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ် ဝမ်းနည်း ကြေကွဲဖွယ် အနာဂတ် ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအနာဂတ်လမ်းကို ပြည်သူတွေ ရှောင်လွဲနေခဲ့တာ အနှစ် ၄၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကစ ဒီပုံ အတိုင်း သာဆက်သွားနေခဲ့ရင် နောင်အနှစ် ၃၀ အတွင်း မြန်မာမြေပေါ်မှ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေ ပျောက်ကွယ်။ ဗမာဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေအစား တရုပ်တွေကြီးစိုးနေတဲ့ ဗမာပြည်ကြီးအဖြစ်ဘဲမြင်တွေ့ ရတော့မှာပါ။
တိုင်းပြည် ဆင်းရဲတာက ကြိုးစားနိူင်ရင် တိုးတက်ပါဦိးမယ်။ ရေကူးတတ်တဲ့သူ ကို ကြိုးတုတ်ရေကူးခိုင်းတာက မတရားတဲ့ ကိစ္စတရပ်ပါ။ ဒီ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲရဲ့ အဖြေဟာ ဖြူသည်ဖြစ်စေ မဲသည်ဖြစ်စေ ဂယ်ပေါက် မရှိတဲ့ မြှုံးတစ်တခုပါဘဲ။ အခုဘဲ ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
ပြည်သူအပေါ် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် အနိူင်ကျင့်ဗိုလိကျနေသူ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းခေါင်းဆောင် တဦးကို သေနတ်သမားများက ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် ပန်ဆိုင်းမြို့နယ် မှာ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွါး ခဲ့ပါတယ်။
မတရားဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်မှု တွေရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဒီလိုလက်တုန့် ပြန်ကလဲ့စားတွေ ရှိနေဦးမှာပါဘဲ။ ဒီလို မြန်မာပြည် ဘာကြောင့်ဖြစ်နေခဲ့ရပါသလည်း။
အရင်းစစ် အမြစ်မြေက မို့ဒီ စစ်အာဏာရှင်ဝါဒ မတည်တံ့ရေး တော်လှန်ဖို့ အချိန်ကျပါပြီ။ VOTE NO သာ ရဲရဲလုပ်ကြပါ ခင်ဗျာ။
Posted by Ashin dhamma at 12:20 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 12:12 PM0comments
အခြားသူများမဟုတ်ပါ န အ ဖ ခေါ်သည့်မိစ္ဆာကောင်တစ်စုသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။
မိမိတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်များကိုလည်းကောင်းစစ်ကျွန်သဘောက်ဘ၀အောက်မှဘယ်သောခါမှမ လွတ်မြောက်စေရန်ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသေအကြံဆိုးအကြံညစ်တို့ဖြင့် အတုအယောင်
မိမိတို့သည်န အ ဖ စစ်မိစ္ဆာကောင်များ၏လိင်လည်လှည့်များမှုမှန်သမျှကို
ထိုသို့မဟုတ်ပါဘဲမည်သူတေတေငတေမာရင်ပြီးရောဆိုသည့် န အ ဖ စစ်မိစ္ဆာကောင်များ၏
Posted by Ashin dhamma at 8:05 AM0comments
နယူးဒေလီ။ ။ ပြည်တွင်းရှိ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ အဖွဲ့ငယ်များအား ပြန်လည် စုစည်းပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှု ဖော်ဆောင် ရန် ကြိုးပမ်းမည့် New Generation Movement for Justice အဖွဲ့ကို ပြည်တွင်း လူငယ်များက ယခုလ ၃ ရက်နေ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။အဖွဲ့၏ ကနဦး လုပ်ဆောင်ချက်များအဖြစ် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့၊ ဗမာပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ)၊ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံး စသည့် လူငယ်အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲတွင် ပြည်သူများအနေနှင့် ကန့်ကွက်မဲပေးရေး လှုပ်ရှားမှုများကို မြို့ရွာအနှံ့ လျှို့ဝှက် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု သိရသည်။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းဆရာ၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား အလွှာအသီးသီး ပါဝင်သည့် New Generation Movement for Justice အဖွဲ့ က အာဏာပိုင်များ၏ လိုက်လံ ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ပြန့်ကျဲနေသည့် စက်တင်ဘာ တော်လှန်ရေး နောက်ဆက်တွဲ အဖွဲ့ငယ်များကို ပြန်လည် စည်းရုံးခြင်းများကို လူထုလှုပ်ရှားမှုအတွက် လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
အတိုက်အခံ အင်အားစုများနှင့် အကဲခတ်များက နအဖ စစ်အစိုးရသည် ပြည်သူလူထုကို အစစ်အမှန် ကိုယ်စားပြုခြင်း မရှိသူများနှင့် ၁၄ နှစ်သက်တမ်းကြာ အမျိုးသားညီလာခံမှ ရေးဆွဲလိုက်သည့် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) သည် စစ်အုပ်စု အာဏာသက်ဆိုးရှည် ရေးအတွက် တရားဝင် ဖြစ်စေရန် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆို ဝေဖန်ကြသည်။ သူတို့က အဆိုပါ မူကြမ်း အတည်မပြုနိုင်ရေး အတွက် ပြည်သူများအနေနှင့် မဲရုံများသို့ သွားရောက်ကာ ကန့်ကွက်မဲပေးရေး လှုံ့ဆော်နေသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရကမူ ဥပမဒမူကြမ်း အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးအတွက် ပြည်လုံးကျွတ် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို လာမည့် မေလ ၁ဝ ရက် နေ့ တွင် ကျင်းပသွားမည်ဟု ယမန်နေ့ညက တရားဝင် ထုတ်ဖော် ကြေညာလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
New Generation Movement for Justice က ဥပဒေအဖြစ် အတည်မပြုနိုင်ရန် မည်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် လူထုလှုပ်ရှားမှုများ ဖော်ထုတ် သွားမည်ကို အသေးစိတ် ပြောကြားခြင်း မရှိပါ။
"Justice (တရားမျှတမှု) လို့ သုံးရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်လို နည်းစနစ်ကြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် တရားမျှတမှု ရှိဖို့ပဲ လိုလားတယ်။ တရားမျှတမူအတွက် သေတဲ့အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ" ဟု မနွယ်လေးဝေက ပြောသည်။
"ကျမတို့ ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းတနှစ်အောက်မှာ သိပ်ကြောက်တယ်။ အလုပ်သမားတွေ၊ လယ်သမားတွေ၊ ဈေးသည်တွေ တနေ့ ဈေးမထွက်ရမှာ ကြောက်တယ်။ အဲဒီအရာတွေ အောက်ကနေ လွတ်မြောက်လာဖို့အတွက် သတ္တိတွေ မွေးဖို့လိုပါတယ်။ တရက်တို့၊ တနှစ်တို့ နောက်ကျသွားတဲ့ အရာတွေကို ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် ကျမတို့တသက် ခံစားသွားရဖို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိပေးချင်ပါတယ်" ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
Posted by Ashin dhamma at 2:05 AM0comments
ရာဇ၀င်မှာ မျိုးဆက်တွေ မနာရအောင်
Posted by Ashin dhamma at 1:55 AM0comments
မိတ်ဆွေဟာ ဒီမြေမှာ ကြီးရင့်ခဲ့ရင် ဒီမြေရဲ့ ကောင်းကင်ကို ခဏဖြစ်ဖြစ် လှမ်းကြည့် လိုက်ပါ။ အမိမြေရဲ့ ကောင်းကင်ယံမှာ S.V.O ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးဟာ သင်ကြည့်ရင် သင်မြင် တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ထင်ထင်ရှားရှား။
…………………….ကိုယ်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။ ဆိုကရေးတီးရဲ့စကားလေးနဲ့ နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။ “ငါကား သေရတော့အံ့၊ သင်တို့ကား အသက်ရှင်လျှက်ကျန်ရစ်ကြမည်၊ သင်တို့နှင့်ငါ မည်သူက ပို၍ ကံကောင်းသနည်းဟု မည်သူပြောနိုင်ပါအံ့နည်း”။ အချုပ်တန်း ဆရာဖေရဲ့ “သေသော်မှတည့် သြော် ကောင်း၏” ဟူသော စကားနှင့် ဆက်စပ်ကြည့်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ashin dhamma at 1:44 AM0comments
ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ နအဖက မဲကို ဒီလိုလိမ်မယ်တဲ့ဗျား . . .
မို့နယ်၊ ရပ်ကွက် အဆင့်အသီးသီးရှိ ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများတွင် တာဝန်ယူထားရသော သူများထဲမှ ကျနော်တို့၏ စိတ်ချရသော သတင်းရင်းမြစ်များမှ ရရှိထားသော သတင်းများအရ ဆိုရလျှင် ….
- မဲရုံတစ်ခုအတွက် ပုံစံတူမဲပုံး (၂) ပုံး ထားရှိရန် စီစဉ်ထားခြင်း။
- ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကို မဲပေးမည့် လူဦးရေစာရင်း၏ နှစ်ဆကျော် ထားရှိရန် စီစဉ်ထားခြင်း။
ဤအချက်အလက်များနှင့် ထပ်မံသိရှိရသော သတင်းအချက်အလက်များအရ နအဖသည် မဲလိမ်ရာတွင် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ အစားထိုး လိမ်လည်ဖို့ပင် မစဉ်းစားတော့ဘဲ မဲပုံးကို တိုက်ရိုက်လဲလှယ်မည့်သဘော ဖြစ် နေပါသည်။ လဲလှယ်မည့်မဲပုံးတွင် ဆန္ဒမဲပေးမည့် လူဦးရေ စာရင်းအတိုင်း၊ ၎င်းတို့ ကြိုတင်စီစဉ်ထားသော ပုံစံ အတိုင်း ထောက်ခံမဲများကို ကြိုတင်ထည့်ထား၍ မဲမရေတွက်မီ လဲလှယ်မည်ဖြစ်သည်။
နအဖသည် ပြည်သူ၏ သဘောထားကို ကျနော်တို့ ပြည်သူများ ကိုယ်တိုင်ထက်ပင် ပိုလို့ သဘောပေါက် နား လည်နေပါသည်။ ၎င်းတို့ခြိမ်းခြောက်သည်ကို ကြောက်ရွံ့ပြီး ပြည်သူများမှ ထောက်ခံမဲများ ပေးလေမလားဟု မျှော်လင့်ချက်ပင် မထားတော့ဘဲ ကျိန်းသေနိုင်မည့် သေချာသည့်အစီအစဉ်ကိုသာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း အထင်အရှား တွေ့နေရပါသည်။
ကဲ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ နည်းလမ်းတွေ ရှာကြရတော့မယ်။
Posted by Ashin dhamma at 1:03 AM0comments